N ingbo Shuangyu (Samewe), njengoba omunye thefamous computer Flat Ukwaluka Machine abakhiqizi, hhayi kuphela ukhathalela ubuningi ukuthi thina akhiqiza kodwa futhi izinga, sinalo investedquite abig isizumbulu semali kule Equipments advancedprocessing ukuthuthukisa machinequality. Sithatha ukuqeqeshwa kwabasebenzi sina ukuqinisekisa futhi ngcono ikhwalithi yomkhiqizo.
SY52-S kuyinto umshini ukonga futhi esisebenzayo amakhastama ourclients. It has izinzuzo ngemali ephansi, izinga esitebeleni andthe recouping yesikhashana dolobha outlay.The umshini adpots ngokugcweleuhlelo elawulwa-computer ngokudlulisela, tucking futhi kushesheukuthutha ukubuyela kanye uhlelo lokulawula motor ngoba colorchanging. It linikeza ukusebenza ozinzile futhi ngejubaneephumelelisa e imisebenzi mkhulu, ezifana intarsia, sticth ethafeni, nokunomsoco, ikhebula izakhiwo, cross-Stitch, jacquard kanye ect.
SY52-2S adpots zindawo zokusesha ezethusayo olulodwa esihle inaliti ibha futhi rackingfor ezimbili inaliti indawo ibha, ngesivinini Ukubuyiselwa emuva ukwandisa ngempumelelo ijubane thekitting ngama-20% -30%. Zombili izinhlangothi grippers yokuzilimaza
kusho ukunciphisa ngempumelelo ntambo udoti kanye ngcono productivity.This uchungechunge ubucwepheshe useddigital ukufeza amaphethini oftransfer, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, ekubumbeni sobala, ekubumbeni ezifihliwe kanye neminye imisebenzi evamile kitting, ke alsocan obumbene okungajwayelekile jacquard multi-anemibala, intarsia, ikhebuli pointelle isakhiwo amaphethini.
SY52-3S adpots zindawo zokusesha ezethusayo olulodwa esihle inaliti ibha futhi rackingfor ezimbili inaliti indawo ibha, ngesivinini Ukubuyiselwa emuva ukwandisa ngempumelelo ijubane thekntting ngama-20% -30%. Zombili izinhlangothi grippers ne ukusika izindlela ukunciphisa ngempumelelo ntambo udoti kanye ngcono ukukhiqiza. Lolu chungechunge isetshenziswa ezobuchwepheshe ukuze kuzuzwe amaphethini ukudluliswa, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, ekubumbeni sobala, ekubumbeni kufihlwe nezinye njalo iphethini ukunitha imisebenzi, liphinde kungaba obumbene okungajwayelekile multi anemibala jacquard, intarsia, ikhebuli pointelle isakhiwo amaphethini .
" Izinga Good, inkonzo Good " uhlale wumgomo wethu futhi credo. Sithatha yonke imizamo ukulawula izinga, iphakethe, amalebula njll futhi QC yethu uzohlola yonke imininingwane ngesikhathi ekukhiqizeni nasekusakazeni ingakafiki imithwalo. Sizimisele usungule ubudlelwane ibhizinisi eside nalabo abafuna okusezingeni eliphezulu imikhiqizo eyikhwalithi kanye service enhle. Inkampani yethu ibamba umoya "emisha, ukuvumelana, umsebenzi ithimba kanye nokwabelana, imizila, intuthuko pragmatic". Ukusinikeza ithuba lokuzama futhi sizobe ukufakazela amakhono ethu.